जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिदैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रम | दर्पण दैनिक
जेठ ७ मा सार्वजनिक गरिदैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
प्रकाशित मिति: २०७९ बैशाख २८ गते ०४:५३
काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आउँदो जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्मा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ८ देखि ११ गतेसम्म छलफल हुने उनले बताए । बजेट अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलगायत भौतिक तयारी पूरा गरेको उनले जानकारी दिए ।
जेठ ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ ४ र ५ गते संसद्मा प्रि–बजेटमाथि छलफल हुने प्रवक्ता डा. पाण्डेले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १२ वा १३ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने र संवैधानिक प्रावधानानुसार जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको उनले उल्लेख गरे । जेठ १५ गतेपछि जेठ महिनाभर संसदमा आर्थिक विधेयक तथा अरू कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने उनले बताए ।